Manampy Ny Keniana Hampibaribary Ny Hosoka Amin’ny Maha-mpikambana Anaty Antoko Politika Ny Teknolojia · Global Voices teny Malagasy
Manampy Ny Keniana Hampibaribary Ny Hosoka Amin'ny Maha-mpikambana Anaty Antoko Politika Ny Teknolojia	Voadika ny 07 Janoary 2013 12:39 GMT
Zarao: Ny fango ho an'ny “Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC)” Keniana. Sary natolotry ny http://www.iebc.or.ke/ (Kaomisiona Keniana Mahaleotena Momba ny Fifidianana Sy Ny Vakim-paritra)
Satria miomana hiatrika fifidianana izay ho filoham-pirenena ry zareo Keniana ato anatin'ny 90 andro, noporofoin'ny teknolojia ny sady maha-namana no maha-fahavalo azy ho an'ireo maro mpanao politika voarohirohy amin'ny fitadiavan-tseza politika malaky miova tarika iarahana, izay tsy vitan'ireo Keniana tsotra ny manakatra azy.
Nanomboka tamin'ny fanamariham-pisiana ety anaty aterineto ho an'ireo maniry hirotsaka ho filoha izy ity. Tena marina fa maro ireo tsy nahita hodiavina rehefa nivoaka ho hitan'ny rehetra nanabaribary ny tao anaty tranonkala Social Bakers fa i Kenya dia manana mpisera maherin'ny 2 tapitrisa ho an'ny Facebook manokana. Marobe ny Keniana ankehitriny no mampiasa ny aterineto ho fialamboly ka hatramin'ny ho safidy hafa hikaroham-baovao.
Nanomboka araka izany ny hazakazaka ary betsaka ireo maniry ny ho filoha no nanomboka nanokatra kaonty Facebook sy Twitter, ny ankamaroany tsy manana tetikady ary tsy mahafantatra akory ny tena fomba fampiasa ity media vaovao ity.
Ny Kaomisiona Keniana Mahaleotena Momba ny Fifidianana Sy Ny Vakim-paritra – Independent Electoral Boundaries Commission (IEBC) – miaraka amin'ny Mpandrakitra ireo antoko Politika dia namoaka ny lisitr'ireo mpikambana anaty antoko politika, isaky ny antoko politika tsirairay avy, tao amin'ny tranonkalan'ny IEBC, feno pejy iray izay azon'ireo Keniana anaovana fangatahana ny angon-drakitra momba ireo mpikambana voasoratra isaky ny antoko politika tsirairay.
Nivoitra tamin'izany àry fa marobe ankehitriny ireo antoko politika no nangalatra ny antsipirihany avy amin'ny Kara-panondrom-pirenen'ireo Keniana tsy misy ahiahy ary dia nanao hitsin-dàlana nanoratra azy ireny ho toy ny mpikambana ao anatin'ny antokon-dry zareo. Ny tanjon-dry zareo tamin'izany dia ny hanatratra ny isan'ny mpikambana tsy maintsy ananana isaky ny vakim-paritra alohan'ny hahatongavan'ny fe-potoana farany voatondro.
Vaky tao amin'ny Twitter ny vaovao momba ity hosoka ity tamin'ny tolakandron'ny Alakamisy 3 Janoary, rehefa nibitsika i Larry Madowo, mpanao gazety niasa niaraka tamin'ny iray amin'ireo trano mpamoaka vaovao isan'ny lohany ao Kenya, ny Nation Media Group, fa hoe nisy nandrakitra tamin'ny fomba tsy ara-dalàna ho toy ny mpikambana anaty antoko politika iray ny tenany. Larry, niharan'ity hosoka nataon'ny “The National Alliance Party (TNA)” ity, izay ny zanaka lahin'ny Filoha Keniana voalohany Mzee Jomo Kenyatta no mpirotsaka ho fidiana atolony, dia nifandona nangata-panazavana tamin'i Uhuru Kenyatta tao amin'ny Twitter .
Ny Praiministra lefitra ao Kenya, Uhuru Kenyatta, izany ny antokony no ampangaina ho manoratra mpikambana hosoka. Fanomezan-dàlana hampiasa ny sary eo ambanin'ny lisansa malalaka GNU Free Documentation License avy amin'ny Anonymous.
‏@LarryMadowo: Tsy mbola niditra taminà antoko politika velively aho hatrizay, NANGALATRA ny antsipirihany momba ahy ny @TNAParty & nanoratra ahy tamin'ny fomba TSY ARA-DALANA ho ao amin'ny antokon-dry zareo. Mpisoloky mankaloiloy! pic.twitter.com/AK1ybcdp
@LarryMadowo: Ry @UKenyatta malala, tamin'ny fomba ahoana no naha-mpikambana ahy voasoratra ao amin'ny antokonao nefa aho tsy nanao izany velively? Izany ve no fahamendrehana tokony handrandrainay avy amin'ny fitantanana maha-filoha anao?
@LarryMadowo: Ampidiro eto ny laharan'ny karapanondronareo http://iebc.or.ke/rpp/ hijerena raha misy antoko politika (ianareo @TNAParty no banjiniko amin'izany) nandrakitra anareo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna.
Noforonina haingana ny tenifototra #FakePartyMembersKe tao amin'ny Twitter rehefa nipongatra fa hoe tsy i Larry irery ihany no tratran'izany. Marobe tamin'ireo Keniana ety anaty aterineto no nandeha nitsidika ilay rohin'ny IEBC mba hanamarina raha toa ry zareo ka voasoratra any anaty antoko politika any, tsy nisy fankatoavana avy amin'izy ireo akory, miaraka amin'ireo izay tratra ary namoaka ny antsipirihany mikasika ireo antoko politika izay nandrakitra azy ireo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna.
#FakePartyMembersKE tsy voasoratra amin'antoko na aiza na aiza ny laharan'ny pasipaoro sy ny karapanondroko. Torohevitro ho anareo ny hijerena azy roa ireo.
Ao anatin'ny ezaka hamaliana ireo fiampangàna hoe ny antoko TNA dia niditra tamin'ny fanaovana hosoka raha nanoratra ireo mpikambana ao amin'ny antokony, ny filohan'ilay antoko, Sakaja Johnson , dia namaly tao amin'ny Twitter tamin'ireto fanehoankevitra ireto :
@KumekuchaPhil Tetika tsy misy ilàna azy io ataon'ny antoko politika tsy mahavita maka ny fon'ny Keniana. #fakepartymemberske
Avy eo ilay filohan'antoko dia niditra tamin'ny fiampangàna ny mpikarakara ny fifidianana ho tao ambadik'ilay hosoka. Nivoitra fa voarohirohy ihany koa ireo antoko politika sasany saingy tsy nisy na iray aza naneho hevitra.
@LarryMadowo maninona ianao no tsy manontany ny @iebcpage hoe fomba toy inona avy no azon'ny olona iray hisoratana anarana aminà antoko. Rafitra iray misokatra ho an'ny maro io.
Notsaingohan'ireo trano famoahan-gazety ao Kenya ilay tantara ary ankehitriny dia fintinina amin'ny hoe fiampangàn'ny antoko TNA miaraka amin'ny IEBC momba ny resaka fahamarinan-toerana sy ny fahazoana antoka an'ireo rindrambaiko izay nampiasaina tamin'ny asa fandraketana ireo mpikambana anaty antoko. Izany dia na dia efa navoakan'ny rafitra miahy ny fifidianana aza fa hoe ny antoko tsirairay dia samy nomena fanalahidy tokana hidirany sy ny hoe ny manampahefana ao anatin'ny antoko irery ihany no hany afaka mampiditra ny rakitra. Ny IEBC dia tonga hatramin'ny famoahana fa hoe nahazo adiresy IP ry zareo raha misy tranga nisian'ny fanoratana mpikambana hosoka. Ny olana anefa dia mbola tsy voavaha satria ny IEBC tsy mbola namaly ny amin'izay fomba hataony hifandraisana amin'ireo antoko.
Tena nitàna mafy an'ireo mpirotsaka ety anaty aterineto ireo Keniana, indrindra fa tao amin'ny Twitter, hikatsahany hahafantatra ny hevitr'izy ireny manoloana ireo olana samihafa mahakasika ny vondrona izay ifaninanan'ireo mpanao politika.
@RailaOdinga Arahabaina nahatratra ny taona ry PM. Inona no drafitrao manokana mikasika ny rafi-pitateram-bahoaka… hamono ny matatus?
Azo antoka fa hitàna ampahan-toerana goavana ny media anaty aterineto amin'ny fizaràm-baovao ho an'ny Keniana marobe sy ahafahan-dry zareo hanao fanamby amin'ireo mpirotsaka ara-politika, mihoatra lavitra noho izay efa hita tany aloha. Any amin'ny rafitra mpikarakara fifidianana ny baolina ankehitriny hamaliany ireo Keniana mpifidy mahafantatra tsara ny vaovao ka mitaky valinteny.
Zarao: twitter facebook reddit googleplusEmail endriny atao pirinty MpanoratraNjeri Wangari
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, Français, 繁體中文, 简体中文, English